नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई पैसा बाड्न ओली सरकारले ल्यायो यस्तो कार्यक्रम, होला त सफल ? - MONGOL KHABAR
नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई पैसा बाड्न ओली सरकारले ल्यायो यस्तो कार्यक्रम, होला त सफल ?
काठमाडाैं । केही बर्ष देखि सुरु भएको आर्थीक मन्दि र कोरोना प्रकोपमा भएको बन्दाबन्दीका कारण धेरै निजि बिद्यालयहरु बन्द हुने स्थितीमा छन । सर्बहारबर्गको पार्टीको रुपमा चिनिने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अधिकांश बिद्यालयमा लगानि रहेको बताइन्छ । अफ्ना कार्यकर्ताहरुको बिद्यालय बन्द हुने स्थिति भए पछि ओली सरकारले आफना नेता कार्यकर्ता पोस्न र पार्टीको प्रभाव बलियो बनाउने उदेश्यले समायोजन तथा एकीकरण कार्यक्रमको नाममा एउटा नीति ल्याएको छ ।